Unodoli wezinja okanye ezinye izilwanyana zokwenza nabantwana #yomequedoencasa | Imisebenzi yezandla
UJenny monge | | Imisebenzi yezandla, Imisebenzi yeekhadibhodi, Imisebenzi yezandla zabantwana
Molweni nonke! Kubugcisa banamhlanje siza kukwenza oku inja ehlekisayo yokuchitha imvakwemini yokonwabisa nabantwana. Ezi ntlobo zoonopopi zilula kakhulu kwaye wakube uyayazi indlela yokwenza inja, ungasebenzisa umbono wakho ukuphinda uzenze izilwanyana ozifuna kakhulu. Ngayiphi na imeko, siya kukushiya neengcebiso zezinye izilwanyana ukongeza kwinja.
1 Izinto esiza kuzidinga ukwenza unodoli wethu wenja
Izinto esiza kuzidinga ukwenza unodoli wethu wenja
Imiqengqelo emibini yekhadibhodi yephepha langasese okanye iityhubhu ezimbini zekhadibhodi engqindilili esinokuyenza ngokuziqengqa nokuncamathisela kwikhadibhodi.
Intambo, uboya okanye naluphi na uhlobo lwezixhobo ezinokusetyenziselwa ukudibanisa amalungu anje ngesiqwengana selaphu, umtya welaphu elidala, njl.
Iindiza ezilahlwayo, okanye iityhubhu ezibhityileyo ezenziwe ngekhadibhodi nezilinganisa imilo yeendiza.
Amehlo obugcisa okanye amehlo enziwe ngamakhadibhodi amhlophe namnyama.
Intonga yobugcisa yokwenza umnqamlezo apho uza kuphatha upopu wethu. Unokusebenzisa usiba okanye into efanayo esebenza kakuhle kulo msebenzi.
I-Tempera, amakishayo okanye ipeyinti yokufaka imibala kwinja yethu (ukhetho)
I-punch yephepha okanye i-cutter yokwenza imingxunya embalwa
Okokuqala, masihambe sika enye yeetyhubhu zekhadibhodi kwisiqingatha ukufumana isiseko sentloko yenja. Enye Isiqingatha siza kusivula kwisiqingatha kwaye apho siya kuzobela kwaye sinqumle iindlebe zenja ngaphambi kokuzincamathelisa entloko.
Songeza amehlo kwaye sele silungiselele iintloko zethu. Ukuba uza kupenda iziqwenga, umzuzu uphambi kokuncamathisela amehlo. Ungapeyinta intloko nomzimba (omnye umqulu) okanye ubashiye kanjalo kwaye ungeze ezinye izangqa okanye amabala.
Ngoku masenze yenza imingxunya, ezimbini entloko, ekupheleni kwempumlo, zombini phezulu nasezantsi.
Emzimbeni senza umngxuma esiphelweni ngasinye phezulu nasezantsi siya kwenza imingxunya emibini ukubeka imilenze.
ukuba yenza imilenze, Sidlulisa iziqwenga ezibini zomtya kwimingxunya engezantsi, sibeka iqhekeza lengca kwicala ngalinye kwaye sibopha iqhina ukuze lingaphumi.
Umsila, Siza kuyenza ngokuncamathisela elinye iqatha lomququ ukuphela komzimba.
Lixesha lokuba ukhwele. Ukwenza oku siza kunqumla iziqwenga ezibini ezifanayo, ezimalunga ne-40 cm ubuncinci. Sizidlulisa kwimingxunya ephezulu yomzimba wenja kwaye sibophe iqhina ngaphakathi kwikhadibhodi ukuzilungisa. Siza kubopha elinye iqhina kwindawo engaphambili (isifuba senja) malunga ne-5 cm kwaye siyigqithise entloko, kuqala ngomngxuma ongezantsi emva koko sidlule ngaphezulu, apho siza kubopha iqhina ngaphakathi kwikhadibhodi kuloo nto. intloko ilungiswe kakuhle.
Kuhlala kuphela ukubopha iziphelo zewele kwintonga yobugcisa kwaye ke, sinopopi wethu.
Ukwenza ezinye iipopi, ezifana nendlulamthi, kufuneka uyenze incinci intloko kunye nomtya owenza ukuba intamo inde. Zama ukubona ukuba zeziphi izilwanyana onokuzenza.
Kwaye ukhumbule #yomequedoencasa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Imisebenzi yezandla » Imisebenzi yezandla » Imisebenzi yezandla zabantwana » Ipopi yenja okanye ezinye izilwanyana zokwenza nabantwana #yomequedoencasa